Hita tsara fa nanome baiko ireo mpitsara ny exécutif tamin'ity raharaha kidnapping ity - Jaona Clémént Président SMM DON DRESAKA DU 07 AVRIL 2019 BY TV PLUS MADAGASCAR - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgache Hita tsara fa nanome baiko ireo mpitsara ny exécutif tamin’ity raharaha kidnapping...
Hita tsara fa nanome baiko ireo mpitsara ny exécutif tamin’ity raharaha kidnapping ity – Jaona Clémént Président SMM DON DRESAKA DU 07 AVRIL 2019 BY TV PLUS MADAGASCAR
Jaona Clément – Magistrat – Président du Syndicat des magistrats de Madagascar
Eto izany izao mivoaka eo imason’izao tontolo izao sy eo anivon’ny firenena fa misy baiko mahazo ny fitsarana Malagasy.
Izay izany ny zavatra lehiben’ny governemanta, minisitry ny fitsarana, dia izay no mahatonga hoe mitohy foana ny fitakiana ny indépendance de la justice. Faharoa, action normal ilay izy satria misy politika napetrany izany raha ohatra ka mahita izy misy hitany hoe misy lesoka ao, anjaran’ny administration active no mandray fanapaha-kevitra amin’ny maha police administrative azy, izy no miandraikitra an’izay. Dia anjaran’ilay olona voakasikan’ilay didy, raha ohatra ka misy ilay didy tsy mahafaly azy, mitondra ny raharaha amin’ny fitsarana. Izay foana no nahatonga anay matetika teto raha tamin’ny taona lasa sy ny talohan’izay niteny hoe: défaillance administrative. Ny police administrative izany tsy dia mibaiko teny loatra. Hatramin’izay izany raha vao misy zavatra miseho ohatran’ireny dia samy mitabataba, samy mimenomenona fa tsisy mésure horaisina. Iny izany ny marika ny fanjakana mandray andraikitra izy, misy ny fanjakana fa mihevitra izy fa tsy mety iny zavatra iny dia mandray fepetra mikasika an’izay izy. Dia anjaran’ilay mpitsara voakasika no mi-agir amin’ny maha tany tandalàna ny tandalàna mitondra ny raharaha eo anivon’ny fahefana mahefa. Manaraka an’izay izany dia ho an’ny filazana fa misy corruption ny mikasina iny cas iny, isika rehetra rehetra dia tsy tsara toerana hitsikera an’izany, fa ry zareo tompon’ny dossier nahita ny dossier no manana ny antony ary manana ny motif namoahany an’ilay olona. Ary aza adino fa rehefa mitsara olona anie, na criminel ilay izy tsy maha-criminel azy fa ny maha olombelona aloha. Olombelona devant-ko izaho mpitsara ity, fa alohan’ny maha izy criminal azy, ka izao izany, ry zareo nandray ny fanapaha-kevitra ataoko fa mahazava tsara ary tsara toerana hanazava raha ohatra ilaina na ny mpanao gazety na amin’ny instance izay hanao enquête. Sur fa tsy maintsy hisy ny hanao enquête amin’io raharaha io amin’ny instance, amin’ny direction pour la protection de l’intégrité au niveau magistrature, hanazava ny fandraisany fanapahan-kevitra. Ary matetika izany ny zava-misy dia hoe, ny fanontaniana mipetraka: hitsara araka ny baiko sa hitsara araka ny lalàna ny mpitsara? Azo atao ny miresaka, azo atao dia hoe tokony ny ary raha matetika amin’ny intervention matetitetika dia hoe ny baiko azon’ny mpitsara matetika omen any mpitsara, tsy ferana be ohatran’ireny hoe: araho tsara ny procédure, jereo tsara ny lalàna, fa ilay teo iny tena ferme hoe tandremo io olona ity tsy avoaka. Amin’izay voatohitohina ny fahaleovantenan’ny mpitsara sy ny fitsarana amin’izany zavatra izany. Ka noho izay izany, ny pratique amin’io dia rehefa misy ny baiko dia anjaran’ilay mpitsara notenenina no mampifandray ny baiko sy ny toe-draharahan’ilay dossier eo am-pelantanany. Dia izaho moa efa niteny mihitsy raha ohatra ilaina hoy aho, matoa ry zareo nanao an’io, aleo mba ho hodinganina ny secret professionnel. Satria raha mijery adry zareo amin’ity raharaha ity izaho, ny 4 magistrats de premier grade avy, dikan’izany olona efa expérimentés tsy vaovao aminazy io. Ny iray ihany no ambanimbany grade amin’izy ireo ka tokony izany ho hita hoe aleo publier-na ilay izy, raha ohatra ka ny tsaho-ny information no entina hanasaziana namana, hanasaziana mpitsara dia publier-na ilay izy dia eon y olona mahita hoe meloka ve, io ilay tas de dossier am-pelatanana namoahana azy dia samy mahita hoe meloka, feno ve ny sazy sa tsy feno. Anjarantsika amin’izay no mitsara azy, ary ny problème amin’izao koa, ny olona rehetra efa lasa mpitsara aby, ny olona rehetra efa lasa dokotera aby. Nefa raha ohatra izany cours-na de procédure pénal amina liberté provisoire izany fotsiny, izany akory tsy vita adiny efatra anie e, hoe efa misy ve ny ordonnance de renvoi devant le cours criminel ordinaire tamin’io dossier io, dia côté technique be izay
Article précédentTokony nitandrina ireo Mpitasara namotsitra – Imbiky Herimlaza DON DRESAKA DU 07 AVRIL 2019 BY TV PLUS MADAGASCAR
Article suivantNy mpitsara dia mitsara araka ny lalàna fa tsy araky ny baiko azony avy any amin’ny exécutif – Jaona Clément SMM DON DRESAKA DU 07 AVRIL 2019 BY TV PLUS MADAGASCAR 1
CHRONIQUE DE N. RAZAFILAHY / Justice impartiale ou procès de lampistes...
Houcine Arfa – Où en est-on des plaintes que vous avez...
Raha vitan’ingahy Andry Nirina Rajoelina marina ny tena mampanao fanadihadiana sy...